Yemen: Firy Ny Vehivavy Niharan’ny Faneriterena Ara-Nofo? · Global Voices teny Malagasy
Yemen: Firy Ny Vehivavy Niharan'ny Faneriterena Ara-Nofo?
Voadika ny 08 Mey 2012 9:23 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, русский, Français, Nederlands, Ελληνικά, Italiano, македонски, English
Niteraka resa-be nahafanina tety anivon'ny aterineto ny lahatsoratra iray [ar] nivoaka taminà gazety Arabo Al Hayat tamin'ny 2 May, nilaza fa 90% amin'ny vehivavy Yemenita no niharan'ny faneriterena ara-nofo.
Na dia niaiky aza ny maro tamin'ireo Mpibitsika fa misy tokoa ny olan'ny fanararaotana ara-nofo ao Yemen, nampizarazara azy ireo kosa ny isanjato notanisan'ilay gazety.
Naniry ny hanaovan'ilay gazety fialantsiny i Marwan Almuraisy:
Mibitsiha amin'ny alalan'ity tenifototra ity ary any amin'ity kaonty ity mandra-panaovan'ny gazety Al Hayat fialantsiny noho io hadisoana goavana tamin'ny asa io ‎‪#AlHayatFail‬‏ ‎@alhayatdaily
Efa nanampy i Almuraisy tanatinà bitsika iray nalefa ho an'ny Tonian-dahatsoratra lefitra ao amin'ny Al Hayat, Jameel Theyabi:
Raha mbola olona mahitsy koa dia hahalala fa tsy azo ekena izany tarehimarika 90% izany eny fa na dia ho an'ireo fiarahamonina faran'izay malalaka sy mikororosy sy fatra-pifikitra main'ny nentin-drazana toa an'i Yemen aza. #AlHayatFail‏ ‎@JameelTheyabi
Abeer Al Yosofi nanontany tena hoe:
Mandra-pahoviana n y vehivavy Yemenita no ho lasibatry ny tatitra mitongilana sy tsy mitombina tahaka izany? #yemen
Mitroatra mafy noho io isanjato io aho ary tsy hanaiky mihitsy hoe ny fanararaotana ara-nofo eto amin'ny fireneko dia ho ambony lavitra noho ny an'ireo firenena izay mahatratra 100% ny fanararaotana ara-nofo any aminy. Eny misy ny faneriterena am-bava fa tsy tsy mahatratra 90% izany ary tsy hoe amin'ny toerana rehetra.
Sariitatra momba ny fanaovana antsojay, avy amin'i Mohammed Al Ridaei. Sary tao amin'ny Pejy Facebook-n'ny fanentanana Safe Streets.
Kanefa, ny olona sasany nahatsapa fa nilaina mihitsy n y niresaka mikasika ilay olana. Nibitsika i Lamis Al Wadeai hoe:
Manao fanamby amin'ireo lehilahy mandà azy ity aho mba hitafy abaya, handrakotra ny tavany ka handeha eny an-tsena sy eny amin'ireo anjerimanontolo na any anaty aotobisy eto Yemen… ka aorian'izay izy dia ho afaka tonga sy hifanakalo hevitra momba ilay isanjato.
Muna nibitsika hoe :
@ArabsUnite: Tsy mampino ahy ny hoe gaga amin'ilay % ambonin'ny vehivavy niaina faneriterena ara-nofo. Ny tolona hisian'ny fiovàna dia midika fahafantarana ny kileman'ny fiarahamonintsika
Alia Eshaq dia niezaka ny hitondra fanazavana ny dikan'ny hoe fanaovana teritery ara-nofo :
Ho fanazavàna : ny fanaovana teritery dia ahitàna ny zavatra rehetra izay nolazaina sy natao, ary tsy misy tovovavy Yemeni na iray aza ka tsy niharan'ny teritery, farafaharatsiny am-bava! Tohero io tranga io raha toa ianao tsy faly
Najla Al Hamadi nanome rohy iray mankaminà lahatsoratra ao anatin'ny the Yemen Times mikasika ny fandraisana andraikitra hiadiana amin'ny faneriterena eny an-dalambe. Nanome ny soso-kevitra avy aminy manokana izy :
Vahaolana : 1. ovàna n y fomba fijerin'ny fiarahamonina manambany ny vehivavy 2. apetraka ny lalàna hanakiviana ireo mpanao faneriterena ara-nofo 3. lalàna hiarovana ny vehivavy sy hitandroana ny maha-olona azy.
Fanentanana iray hanoherana ny faneriterena ara-nofo ao Yemen antsoina hoe Safe Streets (Facebook) [ar] no natombok'ilay mafàna fo sady bilaogera Ghaidaa Motahar tamin'ny taona lasa. Namokatra ity lahatsary ity ilay fanentanana mba hanairana ny fahatsapantena sy hiatrehana ilay olan'ny faneriterena ara-nofo :
Mohammed Alnehmi nanamarika hoe :
Na dia 10% monja aza ilay isanjato , tohano ny fanentanan'ny Safe Streets ary sakano ireo mpanao faneriterena ara-nofo.
Ny gazety Al Hayat dia nanao fialantsiny noho ilay isanjato ambony be notanisainy, tamin'ny filazàna fa iny isanjato tafahoatra iny dia azo taminà fanadihadiana tamin'ny faritra iray.
Raha tokony ho niresaka ilay olana sy nandroso vahaolana no natao, be ny fotoana sy ezaka lany teo ampiadiana hevitra sy fanilihana ilay tarehimarika, izay tafahoatra loatra. Na tiantsika na tsy tiantsika anefa dia miparitaka amin'ny andrika maro samihafa ny faneriterena ara-nofo – fijery – teny na fihetsika. Izany dia zavatra iray zakain'ny vehivavy maro amin'ireo tanan-dehibe eto Yemen, tahaka izay any amin'ny faritra hafa eto amin'ny firenena. Trangan-javatra ilaina ekena io ary hatrehina araka ny tokony ho izy, manomboka amin'ny fampianarana ny soatoavina mampiavaka ny fianakaviana ary ny fampidirana azy ireny ho any anaty rafitry ny fanabeazana, famoronana fanentanana anaty fampahalalam-baovaoa hiresahana ny faneriterena ara-nofo, ary fampidirana sy fampiharana ny lalàna. Amin'izay fomba izay dia ho afaka ny hanana arabe azo antoka isika .